१२ वर्षीया बालिकाको पेटमा ८ साताको गर्भ ! « Janata Samachar
१२ वर्षीया बालिकाको पेटमा ८ साताको गर्भ !
प्रकाशित मिति :4June, 2020 2:37 pm
उदयपुर । कटारी नगरपालिकाकामा १२ वर्षीया बालिकाको पेटमा ८ साताको गर्भ रहेको पाइएको छ । बालिकाको पेटमा ८ साताको गर्भ रहेको चिकित्सकले पुष्टि गरेका छन् । बालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि आइतबार कटारी अस्पतालमा आएकी थिएन । उसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पेटमा गर्भ रहेको खुलेको हो ।
पिसाव र अल्ट्रासाउण्ड प्रविधिबाट ३ पटकसम्म परीक्षण गर्दा बालिकाको पेटमा वच्चा रहेको चिकित्सकले पुष्टि गरेपछि उनका परिवार अचम्म परे । त्यसपछि बालिकाको परिवारले त्यसबारे उनलाई सोधपुछ गरे । सोधपुछ गर्दा बालिकाले आफूलाई १७ वर्षीय युवकले बलात्कार गरेको सुनाइन । बालिकालाई बलात्कारी गरी गर्भवती बनाउने युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
कटारी अस्पतालका प्रमुख निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेट डाक्टर मुकलेसकुमार माधवीले ४ पटकसम्म पिसावबाट परीक्षण गरिने युरिन प्रिगनेन्सी टेष्ट (युपिटी) गर्दा पोजेटिभ देखिएको बताउनुभयो । ‘पहिलो पटकगर्दा पोजेटिभ देखियो बालिका कलिलै देखिएकाले पुनः कन्र्फम गर्न एकछिन पछि युपिड नै गरेका हौ फेरी पोजेटिभ नै देखियो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दोश्रो, तेस्रो, चौथो पटक परीक्षण गर्दासमेत पोजेटिभ देखियो,’ ‘विश्वस्त हुन् अल्ट्रासाउण्ड गरेर हेर्दा ८ साताको गर्व रहेको देखियो ।’
इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका डिएसपी प्रेमसागर केसीका अनुसार गएकामे चैतमा बालिका बलात्कृत भएको प्रारम्भिक वयानबाट खुलेको छ । बालिकाले ठ्याक्कै मितिको एकीन गर्न नसके पनि आइतबार दिएको जाहेरीमा चैत ७ गते बलात्कार गरेको खुलाइएको छ । पीडित परिवारको जाहेरीका आधारमा कटारी नगरपालिकाका १७ वर्षीय बालकलाई बलात्कार गरी गर्भवती बनाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको डिएसपी केसीले बताउनुभयो ।
बैंक तथा सहकारी शनिबार पनि खुल्ने
काठमाडौं । बैंक तथा सहकारी भोलि शनिबार पनि खुल्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले
बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत सबै म्यानपावर कम्पनीको नविकरण हुने
अभिमुखिकरण सेवा दिने संस्थाहरुको पनि नविकरण हुने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्।
गुणस्तरहीन उत्पादन गर्ने गोयन्का सिमेन्टलाई कारबाही
काठमाडौं । गुणस्तर विपरीत उत्पादन गरेको आरोपमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दुई उद्योगलाई कारबाही
पार्टीका विधानमा लेखिएका कुरा पनि समकालीन अर्थराजनीतिका प्रतिविम्ब हुने गर्छ । यसैले राजनीतिक कुरा नै
काठमाडौं । बैंक तथा सहकारी भोलि शनिबार पनि खुल्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भोलि…
बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत सबै म्यानपावर…
बैंकिङ कसुर मुद्दाका दुई फरार अभियुक्त पक्राउ
माछा मार्न गएका दुई जनाको खोलामा डुबेर मृत्यु
एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाकाे साधारण शेयेर नेप्सेमा सुचिकृत